ဂျပန်မှာကျောင်းလာတက်နေတဲ့သင်၊ အိမ်ငှားခအတွက် ဒုက္ခရောက်နေရပါသလား? - JAPO Japanese News
ဂျပန်မှာကျောင်းလာတက်နေတဲ့သင်၊ အိမ်ငှားခအတွက် ဒုက္ခရောက်နေရပါသလား?
လာ 04 Oct 2021, 12:27 ညနေ
ဒီလိုစိတ်သောကတွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားရတဲ့ နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတွေ ဂျပန်မှာတစ်ပုံကြီးပါ..
တစ်ခြားနိုင်ငံတွေထက်ကို စည်းကမ်းတင်းကြပ်တဲ့ဂျပန်ကတော့၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စားသောက်ဆိုင်တွေဟာ မဖြစ်မနေဆိုင်စောစောပိတ်ရတာတို့ရှိသလို၊ အရင်ကတည်းကဆိုင်လာစားတဲ့ဧည့်သည်တွေနည်းလို့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားတွေလျှော့ပစ်လိုက်တဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ဒုက္ခရောက်ပြီး မြန်မာဆွေမျိုးတွေဆီအကူအညီလှမ်းတောင်းကြည့်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့၊ မြန်မာဘက်မှာလည်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့နေရတယ်။
အဲ့ဒီလိုပြောလို့ သူငယ်ချင်းနဲ့ Room sharing လုပ်ရတာလည်းအဆင်ပြေပေမဲ့၊ ကျောင်းသင်ခန်းစာနဲ့အလုပ်ကလည်း work from home များလာပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Zoom ကို သူဖွင့်ကိုယ်ဖွင့် တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုကြတဲ့အခါ အသံတွေဝင်လာတဲ့ပြဿနာလည်းရှိလို့ တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။
Shared apartment ဆိုတဲ့ ပုံစံအသစ်ကိုသိပါသလား?
apartment ၁ ခုတည်းမှာပဲ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်ကိုမျှဝေပြီးအသုံးပြုရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းတစ်ခုစီအတွက် အကျယ်နဲ့အဆောက်အအုံရဲ့ကွာခြားမှုရှိပေမဲ့၊ လာနေတဲ့အချိန်မှာယူလာတဲ့အထုတ်အပိုးတွေကိုထားပြီး၊ အိမ်ကနေ work from home လုပ်ဖို့အတွက်တော့ ဒီအကျယ်အဝန်းနဲ့ဆိုလုံလောက်ပါတယ်။
အိမ်ငှားခက ယန်း ၃ သောင်းကနေစပါတယ်။
အင်တာနက်မျှဝေသုံးခြင်းနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေမျှဝေသုံးခြင်း၊ toilet paper ရဲ့ကုန်ကျမှု စသည်တို့အဖြစ်ယန်း ၁ သောင်းကျသင့်မှာမို့၊ အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးပေါင်းမှ ယန်း ၄ သောင်းသာကျသင့်မှာပါ။
လျှပ်စစ်မီး၊ ရေနှင့် ဂတ်စ်ဖိုးလည်း အဲ့ဒီအထဲမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးများအားလုံးက Youtube နဲ့ Facebook တွေမှာ အင်တာနက်ကိုအသုံးများကြတယ်နော်
စကားမစပ် အိမ်ရှာဖွေခြင်းအနေနဲ့ ဒီလိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းရလဒ်ရှိပါတယ်။
– အလုပ်ပြောင်းရွေ့မှုအတွက် အိမ်ပြောင်းချင်တယ်။
– ယခုထက်အိမ်အခန်းအရေအတွက်ကို များချင်တယ်။
– အခမဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို လိုချင်တယ်။
– မော်နီတာပါတဲ့ Intercom
အခုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Shared apartment ဟာဒီအချက်တွေအတွက် ရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျိုအတွင်းမှာရှိတဲ့ အိမ်များစွာထဲက မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို လွတ်လပ်စွာလည်းပြောင်းရွေ့နိုင်ပါတယ်။
စောစောကပြောပြသွားတဲ့အတိုင်း အင်တာနက်ကြေးက ပေးထားတဲ့ငွေထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်သလို၊ အိမ်ငှားခလည်းသက်သာပြီး အများသုံးဝင်ပေါက်တံခါးနဲ့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အခန်းတံခါးတွေလည်း လော့ခ်လုပ်ထားပေးပါတယ်။
လက်ရှိ၊ ယခုငှားရမ်းမယ်ဆို ၁ လအခမဲ့ဖြင့်(အိမ်ငှားခနဲ့ ပုံမှန်ဝင်ဆောင်မှုကြေးတွေအပါအဝင်) ပရိုမိုးရှင်းရယူနိုင်ပါပြီး။
နောက်ပြီး ပထမဆုံးကုန်ကျစရိတ် ယန်း ၃ သောင်းကိုလည်း ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
※အိမ်အကုန်လုံးကိုတော့မဆိုလိုပေမဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာအိမ်တော့ များစွာရှိပါတယ်။
・ပထမဆုံးကုန်ကျစရိတ် ယန်း ၃ သောင်းအခမဲ့
အကြံပြုအချက်အလက် registration form:
ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကြောင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့အားလုံးအတွက်အထောက်အပံ့အနေနဲ့ JAPO ကကူညီပေးချင်ပါတယ်။
ဝါးကို ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အထဲက ?
ခနဇ၀မြို့(金沢)ရဲ့ ဆောင်းရာသီနဲ့ နှင်းကြိုးဆိုင်း !!